အဆီချဆေးရည်တွေမှာ ဘယ်လိုမျိုး ဓါတ်ပစ္စည်းတွေ ပါဝင်သလဲ - Hello Sayarwon
ကျန်းမာစေမည့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများ » အခြားလေ့ကျင့်ခန်းများ
အဆီချဆေးရည်တွေမှာ ဘယ်လိုမျိုး ဓါတ်ပစ္စည်းတွေ ပါဝင်သလဲ
ဒီခေတ်မှာ လူတွေဟာ အဆီချဖို့ နည်းလမ်းမျိုးစုံ၊အစားအသောက်ပုံစံမျိုးစုံကို ရှာဖွေဖတ်ရှု သုံးစွဲလျက်ရှိကြပေမယ့် သူတို့အားလုံးဟာ မှန်ကန်အကျိုးရှိတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်မဖြစ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ၊ဆေးတွေကို သုံးစွဲမိမယ်ဆိုရင် အချိန်ကုန်လူပန်းဖြစ်ပြီး ဘာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမှလည်း ရရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီလို အနေအထားမှာ အဆီချဆေးရည်တွေဟာ သင့်ခန္ဓါကိုယ်မှာရှိတဲ့ အဆီပိုတွေကို ကူညီလောင်ကျွမ်းဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့ ကယ်တင်ရှင်တဦးဖြစ်လာပါတယ်။
ဒီတော့ အဆီချဆေးရည်တွေမှာ ဘာတွေပါဝင်သလဲ၊အဆီတွေကို ဘယ်လိုလောင်ကျွမ်းပစ်လိုက်သလဲဆိုတာ သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
အဆီချဆေးရည်တွေမှာ ပါဝင်လာတတ်တဲ့ ဗီတာမင်တွေကတော့ ဗီတာမင် B၊ carnitine နဲ့ MIC လို့အတိုကောက်ခေါ်ပြီး အဆီတွေကို လောင်ကျွမ်းပေးနိုင်တဲ့ methionine, inositol, choline တို့ပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။
၁။ ဗီတာမင် B
ကျန်းမာတဲ့ ဆဲလ်အသစ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခန္ဓါကိုယ်ဟာ ဗီတာမင် B ကို အရေးတကြီး လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့တတွေဟာ သင့်ရဲ့ အားအင်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် တနေ့တာလုံးမှာ ပိုမိုတက်ကြွစွာ လှုပ်ရှားနိုင်စေကာ ကယ်လ်လိုရီတွေကိုလည်း ပိုမိုလောင်ကျွမ်းပစ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ ဖြစ်ပျက်ဇီဝဖြစ်စဉ်ဟာလည်း ပိုမိုမြန်ဆန်သွက်လက်လာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်နဲ့ ခန္ဓါဖိစီးမှုတွေ ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါ ရှေ့ဆုံးက ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပေးတဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောစနစ်ကိုလည်း ဗီတာမင် B က အကျိုးပြုပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေများပြားလာရင် သင့်အနေနဲ့ အစားအသောက်တွေကို ပိုစားလာပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ပိုတက်လာမှာပါ။
Methionine ဟာ အသည်းရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ထောက်ပံ့ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် အသည်းကို ပိုမိုကျန်းမာစေပြီး အဆီပိုတွေကို လောင်ကျွမ်းပစ်ကာ စွမ်းအင်တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။
Methionine ဟာ အသည်း နဲ့ ခန္ဓါကိုယ်မှာ အဆီပိုတွေ စုပုံလာတာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်၊လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
Methionine ဟာ histamine ထွက်ရှိမှုကို လျော့နည်းစေတဲ့အတွက် အချို့သော ဓါတ်မတည့်ခြင်းဖြစ်စဉ်တွေကို ရင်ဆိုင်ရာမှာလည်း အသုံးဝင်ပါတယ်။
Inositol ဟာ ဗီတာမင် B အုပ်စုဝင် ဖြစ်ပြီး choline နဲ့ အင်မတန်နီးစပ်ပါတယ်။Inositol ဟာ အဆီပိုတွေကို ဖယ်ရှားလောင်ကျွမ်းစေနိုင်တာမို့ သွေးတွင်းကိုလက်စထရောပမာဏကို ကူညီလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် စိတ်ခံစားမှုအနေအထားနဲ့ အစာစားချင်စိတ်ကို ထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ serotonin ဓါတ် ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်လည်း Inositol က ကူညီပေးပါသေးတယ်။ အစာစားချင်စိတ် လျော့နည်းသွားမယ်ဆိုရင် သင် diet လုပ်ရတာ (အစားအသောက်ဆင်ခြင်ပြီး ဝိတ်လျှော့ရတာ) အများကြီးပိုပြီး အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။
အဆီတွေကို ခန္ဓါကိုယ်အနှံ့အပြားသို့ ပို့ဆောင်ကာ စွမ်းအင်အဖြစ် လောင်ကျွမ်းပစ်ခြင်းအားဖြင့် အဆီပိုတွေ လျော့နည်းသွားအောင် Choline က စွမ်းဆောင်ပေးပါတယ်။Choline ဟာ ရေမှာပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ အာဟာရဓါတ်တမျိုးဖြစ်ပြီး ဗီတာမင် B အုပ်စုဝင် ဖြစ်ပါတယ်။
အတိအကျပြောရရင် Choline ဟာ ဗီတာမင်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာ အများအပြားအတွက် Choline ကို လိုအပ်တယ်ဆိုတာ လေ့လာချက်တွေအရ အခိုင်အမာ သိရှိခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
Carnitine ဟာ အဆီတွေကို လောင်ကျွမ်းပြီး စွမ်းအင်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရာမှာ အရေးကြီးပါတယ်။ ကြွက်သားတွေမှာရှိတဲ့ Carnitine ပမာဏများပြားလာတာနဲ့အမျှ အဆီလောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကို ပိုမိုအားပေးပါတယ်။
စွမ်းအင်တွေပိုများလာတာနဲ့အမျှ သင့်အနေနဲ့ ပိုပြီးနေလို့ထိုင်လို့ ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။Carnitine ပမာဏများပြားလာရင် အဆီတွေကို ပိုမိုလောင်ကျွမ်းပြီး glycogen ဓါတ်ကိုတော့ ချန်ထားမှာဖြစ်ကာ ကြွက်သားတွေထဲမှာရှိတဲ့ lactate တွေကိုပါ ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပစ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေကို အားပေးကူညီတဲ့ ဟော်မုန်းတွေရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းကိုလည်း ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေပါလိမ့်မယ်။
အစားအသောက်စားခြင်းရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က သင့်ခန္ဓါကိုယ်ကို အာဟာရဓါတ်တွေ ဖြည့်တင်းပေးဖို့ ဖြစ်ပြီး အဆီချဆေးရည်တွေဟာ ဗီတာမင်၊သတ္တုဓါတ်၊ပရိုတင်းနဲ့ အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဓါတ်တွေကို သင့်သွေးကြောထဲ ရောက်ရှိသွားစေပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းဟာ အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားတဲ့ detoxification therapy နဲ့ ဆင်တူပြီး ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ ဇီဝဖြစ်စဉ်တွေကို မြန်စေတဲ့အတွက် အဆီပိုတွေကို နေ့စဉ်ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။
အဆီချဆေးရည်တွေဟာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ နဲ့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေကို သက်သာစေတဲ့အတွက် obsessive overeating လို့ခေါ်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် အလွန်အကျွံအစားစားခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာပါ။ ဒါ့အပြင် ၎င်းဟာ ဗီတာမင်နဲ့ အာဟာရဓါတ်တွေစုပ်ယူမှုကိုလည်း ပိုမိုများပြားအကျိုးရှိစေပါတယ်။
အဆီချဆေးရည်တွေဟာ သင့်ရဲ့ အဆီချပန်းတိုင်ကို အရောက်ပို့ပေးနိုင်တဲ့အပြင် စွမ်းအင်တွေကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အတွက် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားကစားတွေနဲ့ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေကိုလည်း မပင်မပန်းဘဲ အားကြိုးမာန်တက် လုပ်ဆောင်နိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် သင့်ခန္ဓါကိုယ်အလှအပကို ထိန်းသိမ်းရုံသာမက ကျန်းမာရေးအတွက်ပါ အကျိုးရှိကောင်းမွန်တဲ့ အဆီချဆေးရည်တွေဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပိုမိုခေတ်စားလူကြိုက်များလာတာပဲ ဖြစ်ပါကြောင်း။
The Drip Lounge “Skinny Drip” isaVitamin IV Weight-loss Solution. http://dripivtherapy.com/drip-
lounge-skinny/ - . Accessed on Aug 22 nd November 30, 20152016.
IV Vitamins Drip or Intravenous Infusion … What Is It All About
. http://venusfacebody.com/IV-Infusion- Therapy.html. Accessed November 30, 2016.
http://thedriproom.com/makes-weight- loss-drip- good-weight- loss/. -Accessed November 30, 2016.
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် မတ် 26, 2020 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် စက်တင်ဘာ 12, 2017 .2mins read